MAGACYADA BADAN EE JARMALKA, JARMALKA BADAN
Xayiraadda Xayawaanka ee Jarmalka (Mawduucyada Maqaarka ee Plural)
LAMBARKA LAMBARKA ALAABAHA (JIRA), LAMBARKA LAMBARKA LAMBAR
Jarmalka Jarmalka, Plural Hal
Foomka muujinaya hal lambar oo magac ah waa qaabka keli ah ee magacaas. Tusaale ahaan, ereyada sida kumbuyuutarka, buugga, qofka waa qaabab keli kali u ah magaca. Si loo muujiyo in ka badan hal magac, magac jamac ah ayaa loo adeegsadaa. Tusaale ahaan, ereyada sida kumbuyuutarrada, buugaagta, dadku waa jamac.
Turkiga, si loogu beddelo magac keli ah qaab jamac ah, erayga ku habboon -ler ama -lar ayaa lagu darayaa dhamaadka magacaas.
Jarmalka dhexdiisa, si kastaba ha noqotee, ma jiro sharci gaar ah oo la bixin karo guud ahaan. In kasta oo magac kastaa u noqon karo ereyo madax-bannaan kelinimada iyo jamac ahaan, haddana waxa laga yaabaa in ereyo isku mid ah loo adeegsado keli iyo keli ahaan. Mararka qaarkood qaabka jamac ee magaca ayaa lagu heli karaa iyadoo lagu daro qaar dhejisyo ah dhamaadka erayga.
Tan iyo markii ay iyagu ma ay siin tilmaamo gaar ah samaynta jamaca in Jarmal, hadallo xasuusta xasuusta waa in had iyo jeer jamac.
Xeerka guud oo kaliya ee la siin karo dhismaha dhererka Jarmalka waa in dhammaan ereyada jamacadu ay "dhimanayaan""Jinsi" ama "Jinsi" oo ah "Dhimasho" waxaa loo isticmaalaa wax kasta oo jinsiga ah, ee maqaalkan gaar ah. Maqaalada aan xadadka ahayni waa sida ugu fudud ee loo maareyn karo inta ay yihiin.
Taasi waa; maqaallo aan fiicnayn (ein-eine) looma isticmaalo jamac. Xaaladdan oo kale, magacgu keligiis ayaa loo isticmaalaa, iyada oo aan wax maqaal ah.
Isku-dhafid la'aanta ah (kein-keine) ayaa loo adeegsadaa oo keliya "keine" sida badan.
Waxaan ka caawin doonaa kor ku xusan tusaale ahaan;
der Vater (aabaha) -------- Dhimashada Väter (aabbe)
dhimatay Mutter (hooyo) -------- Dhimasho Mütter (hooyo)
Das Mädchen (gabar) ---- Dhimasho Mädchen (gabdhaha)
Sida aan ka arki tusaalooyinka aan kor ku, "ayuu yidhi, das, dhiman" article, in "dhiman" ayuu jamac loo adeegsan jiray.
Gaadiidka baska (baska) ------- Busse (basaska)
ein Freund (saaxiib) - Freunde (asxaab)
ein Kellner (waardiye) ------ Kellner (waardiyeyaashii)
eine Lampe (laydh) ------ Lampen (nalalka)
eine Mutter (hooyo) ------ Mütter (hooyooyinka)
Sida lagu arkay tusaalayaasha kor ku xusan, "ein" iyo "eine" ayaan loo isticmaalin jamac ahaan.
Erayga keligiis ayaa loo isticmaalaa.
Kein Buch (ma aha buug) ------ Keine Bücher (ma aha buugag)
kein kellner (maaha waardiye) ----- keine kellner (ma sugin)
keine Lampe (maaha lambar) ----- keine Lampen (maaha lambarro)
Keine Mutter (ma ah hooyo) ----- Keine Mütter (ma ah hooyo)
Sida lagu arkay tusaalooyinka kor ku xusan, "kein" iyo "keine" waxaa loo isticmaalaa oo keliya "keine" sida badan.
In kasta oo sharciyada qaarkood verilemes muddo badan sahasho in aad baari doonaa xeerka dhismaha jamac magacyada qaar in qaybta xigta.
Boggan waxaad ku qori kartaa magacyo badan.
Waxaan bartay Gudbey keli-jamac in magacyada Jarmal, erayo Jarmal sida ay u barteen in samaynta olduk badan haddii ay casharo kale in ay naga caleenta ama magaca Jarmal ah ay dhacdo in Waanininaa our bakabilirsiniz.alman by magaca dhacdada mawduuca of our sheeko waa sida soo socota.:
Daraasadda kiisaska Jarmalka
Faahfaahinta mawduuca Jarmalka
Magaca maadada ee Jarmalka
Waad ku qori kartaa su'aalo iyo faallooyin ku saabsan casharadeenna Jarmalka ah goobaha almancax. Su'aalahaaga oo dhan waxaa ka jawaabi doona macallimiinta almancax.
Tags: 10. magacyada jarmalka ee jarmalka, 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. magacyada jarmalka ee jarmalka, 9. fasalka nasiibka mawduuca, Jarmalka faransiisku wuxuu ku hadli doonaa mawduuca mawduuca, Magacyada Jarmalka, jumladaha jarmalka ee mawduucyada mawduuca, ha sifeynin magacyada german, jamacada magacyada german